Aadan Madoobe “AMISOM iyo Ciidamada Itoobiya wada hadal ayaa u socda” – idalenews.com
Aadan Madoobe “AMISOM iyo Ciidamada Itoobiya wada hadal ayaa u socda”
Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya ahna Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa sheegay in Ciidamada Itoobiya iyo Saraakiisha AMISOM uu wada hadal u socdo, kadib markii shalay magaalada Baydhabo ay gaareen saraakiil ka tirsan AMISOM.
Aadan Madoobe ayaa sheegay in Saraakiisha Itoobiya ay u sheegeen in mudada ay ku fogaatay, isla markaana aanay Caalamka wax dhaqaale ah ka helin, waxaana uu tilmaamay inay isaga baxayaan deegaanada ay soo galeen.
“Markii aan u tagnay waxay inoo sheegeen inay baxayaan, waqtigii oo ku fogaaday iyo dhaqaalihii oo ay caalamka ka helin”ayuu yiri Aadan Madoobe oo xusay in lama filaan ku noqotay ka bixidii Itoobiya ee degmada Xudur.
Waxaa uu rajo ka muujiyay in Ciidamada Itoobiya ay si dhameystiran uga bixi doonaan, hadii ay isu dheeli tiraan ammaanka, isagoo intaa ku daray in Ciidamada AMISOM ay kala wareegi doonaan ammaanka deegaanada ay ka bixi doonaan.
“AMISOM iyo Ciidamada Itoobiya waxaa u socda wada hadal, waxaana rajeyneynaa in si dheeli tiran ammaanka loo sugo, marka ay ka baxayaan ay AMISOM ku wareejiyaan meelaha ay baneynayaan”ayuu yiri Mr Madoobe.
Saraakiisha AMISOM ee shalay gaaray Baydhabo ayaa u sheegay Ciidamada Itoobiya inay ka war sugaan inta ay Ciidamadooda ka soo xoojinayaan, isla markaana ay kala wareegayaan goobaha ay ka bixi doonaan.
Kulamada ka socda magaalada Baydhabo ayaa ahaa mid aan kala go’ laheyn, iyadoo saraakiisha ciidamada dowladda, xildhibaanada iyo wasiiradii dhowaan tagay Baydhabo ay kala hadleen Itoobiyaanka in aanay ka bixin magaalada, si Al-Shabaab ugu suura gelin in si fudud gacanta ugu dhigaan.
Xoogaga Al-Shabaab ayaa Axadii la soo dhaafay la wareegay magaalada Xudur ee Gobolka Bakool, markii Ciidamada Itoobiya ay isaga baxeen muddo sanad ah.
Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga oo ku tilmaamay ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya waqti aan habooneyn